အနုပညာမှာ အားနည်းပေမယ့်လည်း သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့ MC ကယားလေးတို့နှစ်ဦးကတော့ အဆိုတော် ယုန်လေးကြောင့် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့သီချင်းလေးကိုလည်း ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေဆီ ချပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
လတ်တလောမှာတော့ ယုန်လေးက ကျေးဇူးသိတတ်လွန်းတဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့ MC ကယားလေးတို့နှစ်ဦးကြောင့် ပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နယ်ပြန်ပြီးကာမှ ကျေးဇူးရှိတဲ့ ယုန်လေးကို ပြန်လာကန်တော့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ တကယ့်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းကြတဲ့ တပည့်တွေပါပဲနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ တပည့်နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယုန်လေးကတော့ “MV လေးထွက်ပြီးထဲက ကျွန်တော်တို့ ပျော်လွန်လို့ ငိုပြီးပြီ ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်ပါတယ် ။ အခု ရန်ကုန်ရောက်တော့လည်း ကွင်းထဲ အထိ လာကန်တော့တဲ့ ညီလေးနှစ်ယောက်ကို တကယ်ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်မိပါတယ် ။လေ့လာစရာတွေ လေ့လာပြီး ကိုရူးသွတ်တဲ့ အနုပညာကို ဆက်လက် ရူးသွတ်နိုင်ပါစေ . Nov 8 မှာ Music World Nov9မှာ Lighting Festival Nov 12 မှာ လမ်းမတော် တန်ဆောင်တိုင် မှာ သူတို့ဖျော်ဖြေမှာပါ . အားပေးကျဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။” ဆိုပြီး သူ့ကို အားကိုးကြတဲ့ ညီလေးနှစ်ယောက်ကို ရှိုးပွဲတွေလည်း ခေါ်ဆိုမယ့်အကြောင်း ပြောထားပါသေးတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ဆရာလို ကျေးဇူးရှိတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေးကို ကျေးဇူးသိတဲ့အနေနဲ့ တကူးတက ရန်ကုန်ပြန်လာပြီး ကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ MC ကယားလေးနဲ့ Rap ကျားကြီးတို့ကို သဘောကျရင် Share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။